ခရီးသွားဆောင်းပါး Archives - News @ M-Media
Post Tagged with: "ခရီးသွားဆောင်းပါး"
မရှိသုံး သုံးနေရသည့် ရန်ကုန်မှ မြို့ပတ်ရထား (ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး)
နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ M-Media – ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့ပတ်ရထားလမ်းမှာ ပြည်သူလူထု၏ နှစ်သက်မှုကို သိပ်မရ။ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေသည့် ရထားများက နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့မှ ဘူတာပေါင်း ၃၉ ခု ကို တစ်နာရီ ၁၀[Read More…]
November 19, 2015 — မြန်မာသတင်း
မြန်မာ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ၂၀၁၅ ဟဂ်ျကျင့်စဉ် ခရီးမှတ်တမ်း(၆)
စက်တင်ဘာ ၃၀ ၊ ၂၀၁၅ M-Media အဘာဘီးလ် ပေးပို့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မဲခွဲတမ်း ဟာဂျီများ မက္ကာမြို့နှင့် မြို့ဝန်းကျင်ရှိ အစ္စလာ့မ် သမိုင်းဝင်နေရာများသို့ လှည့်လည် လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ လေ့လာရေးခရီး ပထမခရီးစဉ်အဖြစ် စောင်ရ် လှိုဏ်ဂူရှိရာ[Read More…]
September 30, 2015 — မြန်မာသတင်း
မြန်မာ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ၂၀၁၅ ဟဂ်ျကျင့်စဉ် ခရီးမှတ်တမ်း(၅)
စက်တင်ဘာ ၂၆ ၊ ၂၀၁၅ M-Media အဘာဘီးလ် ပေးပို့သည်။ ယနေ့ ဟဂ်ျ ကျင့်စဉ် ပဉ္စမမြောက်ရက်အဖြစ် ဟာဂျီလောင်းများသည် စခန်းချရာ မီနာကွင်းပြင်မှ ရှိုက်တွာန် မာရ်နတ် အထိမ်းအမှတ် တိုင် သုံးခုကို ခဲပေါက်ရန်[Read More…]
September 26, 2015 — မြန်မာသတင်း
မြန်မာ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ၂၀၁၅ ဟဂ်ျကျင့်စဉ် ခရီးမှတ်တမ်း(၂)
စက်တင်ဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၁၅ M-Media အဘာဘီးလ် ပေးပို့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဟဂ်ျကျင့်စဉ် ဒုတိယနေ့အတွက် ဟာဂျီလောင်းများသည် အာရဖသ် ဆုတောင်းပြည့် ကွင်းပြင်သို့ အသုတ်လိုက် ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။[Read More…]
September 23, 2015 — မြန်မာသတင်း
မြန်မာ မွတ်စလင်မ်များနှင့် ၂၀၁၅ ဟဂ်ျကျင့်စဉ် ခရီးမှတ်တမ်း(၁)
စက်တင်ဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၁၅ M-Media အဘာဘီးလ် ပေးပို့သည်။ . စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် တွင် ဟဂ်ျကျင့်စဉ် ပထမရက်အဖြစ် ဟာဂျီလောင်းများ မီနာစခန်းတွင် စခန်းချ တည်းခိုနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ .[Read More…]
September 22, 2015 — မြန်မာသတင်း